E-Beach Haven yethu enhle zipholele efulethini lakho elikhulu elingaphansi kwamakamelo amabili okulala phakathi kwama-Pohutukawa amahle anokubukwa okuhle kolwandle nasemaphandleni.
Ukugeleza okuhle kwangaphakathi/kwangaphandle kungene engadini enkulu/igceke elikhulu elizungezwe izihlahla zesundu lapho ongakwazi khona ukuhlala futhi uthule ubukele amagagasi futhi ulalele i-tuis ngenkathi ujabulela ubhiya/iwayini. Kukhona ikhishi elihlome ngokuphelele futhi ungakwazi nokudla i-alfresco usebenzisa i-BBQ. Siyaqinisekisa ukuthi ngeke ufune ukuhamba!
Ifulethi liziqukathe ngokuphelele futhi linekhishi elihlomele kahle elivuleleka endaweni yokuphumula enkulu ehlanganisa imibhede emibili yokulala elungele ukuhlala elangeni, indawo yokudlela enetafula elinwebekayo kanye nombhede we-king single trundle owengeza izihlalo ezengeziwe. Ngezicabha ezimbili kukhona igumbi elikhulu elakhiwe elangeni elinosofa ababili okuholela emakamelweni amakhosikazi amabili elilodwa elinewodilophu. Igumbi lelanga/igumbi lokulala linezicabha ezinkulu ezigoqelwe kabili eziphumela kuvulandi. Wonke amagumbi athwebula ilanga futhi anokubukwa okumangalisayo kolwandle. Kukhona indawo yokugezela yeshawa okwazi ukungena kuyo ngaphandle kwegumbi lokuphumula kanye neshawa efudumele ngaphandle ukuze ukwazi ukugeza ngemva kokubhukuda olwandle.
Uma abantu abadala abahlanu noma ngaphezulu behlala singenza igumbi lokugezela elincane elihlukile litholakale.
Kuyimizuzu emi-5 ukuhamba ngomgwaqo oya e-Waiotahe Beach Surf Club. Kunguhambo lwemizuzu emi-5 ukuya e-New World Supermarket kanye nedolobha lase-Opotiki elihlinzeka ngohlu oluncane lwezitolo nezindawo zokudlela kanye nezinye eziheha izivakashi zasendaweni. Sincoma ngokukhethekile ukuthi uvakashele i-Kafe Coffee Caravan e-King Street ukuze uthole inkomishi yekhofi enhle.
I-Paerata Ridge iyindawo enhle yokuhlala ngasogwini lolwandle ebukeka kahle kakhulu e-Waiotahe Beach futhi iyi-7 Km ukusuka elokishini lase-Opotiki.
Thina (abanikazi) sihlala esitezi esiphezulu esihluke ngokuphelele kodwa siyakujabulela ukusebenzelana nezivakashi zethu uma befisa futhi bayakujabulela ukusiza nganoma imiphi imibuzo noma ulwazi lwendawo oludingekayo.